Sida la sheegay ay Econsultancy , music geeyo online ayaa labanlaabmay 2013 iyo adeegyada Times geeyo sida Spotify, Google Play ayaa gaartay £ 103m. Laakiin waxaa weli jira dad jecel waxaa laga yaabaa in ay soo bixi audio geeyo iyo muusiko dhegayso offline on qalabka ay la qaadan karo.
Dhab ahaantii, ma aha wax macquul ah in la helo qalab ah oo noo ogolaadaa in ay soo bixi music ka dhan ah goobaha hoorto oo laga yaabaa in tallaabooyin ammaan gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isticmaali karaan qalab wax lagu qoro si ay u qabsadaan audio geeyo ama music kaliya iyada oo kaarka codka kombiyuutarka.
Sida loo doorto qalab weyn oo lagu qoro idiin sameeyo?
Halkan waxaan ku siin doonaa fikrad ah in labada software freeware iyo bixisay. Haddii aad u qoraan cod mararka qaarkood, waxaad isku dayi kartaa freeware inkastoo laga yaabaa in aad u baahan tahay goobaha dheeraad ah iyo wax qabadka laga yaabaa in aanay joogto ah. Haddii aad u baahan tahay qalab gaar ah oo loogu talagalay duubista hoorto, kaas oo sidoo kale shaandhayn kartaa xayaysiisyada iyo aqoonsado macluumaad music caqligiisu, waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad isku daydo software ka bixisay si loo xaqiijiyo in qaab ka fiican oo taageero farsamo oo dagdag ah.
Qeybta 1: Download music free la TunesGo, samee goobaha music sida maktabadda
Qeybta 2: geeyo Free software duubista
Qeybta 3: Lacag hoorto software duubista
Qeybta 4: Isbarbar oo ah qalab wax lagu qoro geeyo audio
Waxaa jira laba qof oo ah qalab wax lagu qoro lacag la'aan ah oo laga yaabo inuu kaalmo weyn. Laakiin Badankoodu kuwo u baahan tahay qaar ka mid ah goobaha adag oo tan iyo markii ay yihiin lacag la'aan ah, iyaga oo aan inta badan waxay leeyihiin updates. Waxa kale oo ay mararka qaarkood ma shaqeyn doonaan oo ma waxaad noqon kartaa qof caawimo. Haddii aad u baahan tahay oo keliya in ay u qoraan dhowr heeso hoorto, qalab u noqon karaan haddii aad doorbidayso. Aan hubi qalabka hoos ku qoran.
Dhiiran waa il furan editor audio iyo taariikhqorihii dhawaaqa computer. Waxa ay taageertaa Windows, Mac OS X, Linux iyo wax ka badan. Wixii qalab bilaash ah, waxa ay dhab ahaantii wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo wanaagsan, sida codadka tafatirka, qodan multitrack oo lagu qoro dhawaaqa.
Talaabooyinka la isticmaalo dhiiran si ay u qoraan audio geeyo,
Hubi tallaabooyinka hoose iyo wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad u gudbin kartaa tutorial dhiiran ee .
Talaabada 1: aad u baahan tahay in ay marka hore awood qalabka codka si aad u noqon si ay u qoraan loo maqli karo computer awood iyo dooran aqbasho ee dhiiran in ay aqbasho qalabka dhawaaqa ee lagu qorayo loo maqli karo computer. Haddii aad qabto dhibaato la, raac tilmaan- haddii aad isticmaalayso nidaam ka hawlgala Windows.
Talaabada 2: aad u baahan tahay inuu ka soo leexdo Software Playthrough off. Tag ka Rikoodh page of dhiiran aad rabtid inaad sidaan sameyso.
Talaabada 3: marka wax walba waa diyaar, riix Record button iyo bilowdo inuu ka ciyaaro audio geeyo ah. Riix Stop in dhamaadka.
Talaabada 4: guji dhoofinta si loo badbaadiyo audio duubay sida regelingen ama qaab AIFF. Waxaa la samayn.
2. Free Sound taariikhqorihii
Free Sound taariikhqorihii waa software kale duubista codka lacag la'aan ah. Waxa ay taageertaa qoro cod internet ama audio ka DVD, cajaladaha jir in MP3, WMA ama qaab regelingen si toos ah. Waxaad ku siin karaa isku day ah.
Talaabooyinka la isticmaalo Free Sound taariikhqorihii si ay u qoraan hoorto audio
Waa mid aad u fudud Tallaabooyinka. Kaliya na raacaan si ay u arkaan sida loo isticmaali ku haboon.
Talaabada 1: marka hore fur fiicni suuqa kala barnaamijka iyo doorato aalad lagu qoro. Riix Options in jadwal aad duubo haddii aad u baahan tahay iyo doortaan Nooca Output File in goobaha guud.
Talaabada 2: riix Start qoro button iyo muusig online aad jeceshahay.
Talaabada 3: guji Stop duubo inaan shaqada iyo ka dibna aad ka eegi kartaa file u diiwaan adigoo riixaya File List button.
Haddii aad inta badan u qoraan cod si aad nolol maalmeedkaaga, waxaa lagu talinayaa in aad hesho barnaamij duubo bixiyo qaab fiican oo taageero farsamo. Kuwani barnaamijyada bixisay leeyihiin user-friendly interface oo awood kuu dhammayn aad shaqada ku daqiiqo. Waa mid aad u fudud in la isticmaalo iyo sidoo Waxay. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah oo aad siin kartaa shot a.
Barnaamijkan waa mid jaban ee suuqa laakiin waxa uu leeyahay muuqaalada sida ugu badan dadka kale. Waxaa u qoraan karaan hoorto music si toos ah uga your computer. Waxa aad maqli waa waxa lagu siiyo. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u qorsheysato duubo heesaha oo ku haboon wareejiyo MP3 faylasha diiwaan in Lugood. Waxa kale, waxa kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ringtones iyo sidoo kale la abuuro playlists. Baro More >>
Talaabooyinka la isticmaalo Streaming Audio Recorder si ay u qoraan hoorto audio
Waxaa jira saddex tallaabo oo kaliya ka hor inta aanad ka heli kartaa MP3 faylasha diiwaan. Soo socda waa kooban oo aad la xiriiri karto si ay qodobkan u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ku rakib oo ay maamulaan Streaming Audio Recorder ah
Record geeyo audio
Transfer diiwaan audio ama music in Lugood
Diiwaanka SoundTap audio ciyaaray on your computer iyo badbaadiyay files si regelingen ama qaab MP3. Waxa kale oo ay u qoraan karaan webcasts radio internet, warbaahinta audio iyo wax ka badan.
Talaabooyinka la isticmaalo SoundTap Streaming Audio Recorder si ay u qoraan hoorto audio
Bal aynu eegno sida ay u isticmaalaan SoundTap si ay u qoraan cod si fudud.
Talaabada 1: rakibi oo ay maamulaan SoundTap SAR ka dibna riix Start Rikoodh in ay diyaar.
Talaabada 2: tago in goobaha music geeyo jecel aad muusikada ciyaaro ka dibna barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi music geeyo ka.
Talaabada 3: guji Stop Rikoodh dhammayn duubo iyo aad ciyaari kartaa music ku saabsan barnaamijkan.
Waxaan la hadlay oo ku saabsan afarta duubo barnaamijyada kor ku xusan oo aad kala socon kartaa talaabooyinka si aad u hesho audio geeyo diiwaan ah. Waxyaabaha soo socda ayaa waxay noqon doonaa barbardhigga oo ka mid ah afar qalab kaa caawinaya in aad si fiican u go'aansato mid ka mid ah xaq u leeyihiin inay doortaan. Waxaa Fiiri.
Regelingen ama AIFF
MP3, WMA ama regelingen
MP3 ama M4A
Regelingen ama MP3
Intelligent Music Aqoonsiga
Suitablity u Rikoodh Songs
> Resource > Beddelaan > Sida loo qabsaday, Record, Download iyo Save Streaming Audio ama Music for Free